Izindaba - Ungaxhuma kanjani imojula yekhamera yokusondeza ye-IP ngeyunithi yekhamera ye-PTZ?
Uma utholaBuka amamojula wekhamera ye-sheen's zoom, uzothola amaqembu amathathu izintambo kanye RS485 tail board.
(I-RS485 tail board ivamise ukusethwa kumojula yekhamera yokusondeza)
Amaqembu amathathu ezintambo Sondeza ibhulokhi yekhamera nge-RS485 tail board
Kunganisiyayidinga i-RS485 tail board?
Buka amamojula wekhamera yokusondeza ye-sheen anamaqembu angu-2 okusetshenziswa kubonwa kwe-TTL: Iqembu lezindawo zokusebenzelana zokudlulisa umthetho olandelwayo we-VISCA, amanye amaqembu okuxhumana ukuze kudluliselwe iphrothokholi ye-PELCO.Enye i-Pan-Tilts Unit isekela kuphela isixhumi esibonakalayo se-RS485 ukuze sidlulisele iphrothokholi ye-PELCO, ngakho sisebenzisa ibhodi elimsila le-RS485 ukuze siqaphele umhumushi wezinga.I-RS485 tail board iphinde isekele okokufaka nokuphumayo kwamasignali e-alamu.
Kanjani Ukuxhuma ibhodi le-RS485 Tail ngekhamera?
●Buka amamojula wekhamera yokusondeza ye-sheen anezakhiwo ezi-2 zokusebenzelana, njengoba kuboniswe esithombeni:
Umfanekiso1.1 izakhiwo zesixhumi esibonakalayo 1 Umfanekiso 1.2 izakhiwo zesixhumi esibonakalayo 2
AMANDLA ozimele obomvu: ukunikezwa kwamandla kanye nembobo ye-serial kuhlanganisiwe.
Uhlaka oluluhlaza PHY: isixhumi esibonakalayo sekhebula lenethiwekhi, 4-pin 100M
I-AUDIO&CVBS yohlaka oluluhlaza: Okukhipha umsindo/i-Analog.
●Isakhiwo sokusebenzelana kwekhamera:
Kanjani Ukuxhuma ibhodi le-RS485 Tail ne-PTZ?
●Ukuxhumana phakathi kwebhodi lomsila le-RS485 nemojula yekhamera yokusondeza kungokulandelayo:
Ukuxhumana komdwebo we-+485 Tail-Board
Incazelo yomdwebo we-485 Tail-Board
● Ukusetshenziswa kokushintsha kokudayela:
Njengoba kubonisiwe kumdwebo ongenhla, amaswishi okudayela oku-1 kuye ku-6 asethwe ukuthi AVALWE ngokuzenzakalelayo.
Ithebula elilandelayo libonisa imisebenzi ehambisana nokudayela okuthile.
Inombolo ye-DIP Incazelo Incazelo
I-DIP 1 I-alamu ivaliwe VULIWE: Ikhipha izinga eliphezulu (5V) uma kunomcimbi we-alamu, izinga eliphansi uma ungekho umcimbi we-alamu;ihambisana nezikhonkwane 5 no-7 zesokhethi ye-J3VALIWE: Ivuliwe uma kunomcimbi we-alamu, vala uma kungekho mcimbi we-alamu, ohambisana nezikhonkwane 5 no-6 zesokhethi J3
I-DIP 2 N/A N/A
I-DIP 3 I-alamu ingena VALIWE: Okokufaka kwe-alamu kubikwa ngembobo ye-serialVULIWE: Umsebenzi we-alamu awubikwa ngembobo ye-serial, okusho ukuthi umsebenzi wokufakwa kwe-alamu awuvumelekile
I-DIP 4-6 Ilungiselela isilinganiso se-serial port baud Ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla kuhambisana no-4,5,6;U-1 usho VULIWE, u-0 usho UKUVALWA【000】: 9600【001】: 2400【010】: 4800【011】: 14400【100】: 19200【101】: 38400【110】: 57600
Isikhathi sokuthumela: Dec-03-2021
Ikhamera yezinga lokushisa Imojuli Yekhamera Yokusondeza Kwenethiwekhi Ikhamera yokusondeza ende 30x Zoom Camera Mdule Ikhamera yokusondeza enkulu kakhulu imojuli yekhamera yokusondeza